Zvese zvaunoda kuti uzive nezve iyo Proforma Invoice | Ehupfumi Zvemari
Zvese zvaunoda kuti uzive nezve iyo Proforma Invoice
Susana Maria Urbano Mateos | | Entrepreneurs, makambani
Wakatenga mota here kana sevhisi inozopihwa mune ramangwana? Kana zvirizvo, saka ivo vanenge vakupa iwe, kungave online kana netsamba, invoice yeproforma. Icho chinyorwa chinoshandiswa mumabhizimisi akawanda uye kuti hatisati tajekesa kuti ndeyei kana kuti inoshandiswa riini.
Kana iwe uchizvishandira, ipa masevhisi pamhepo, kana iwe ukatenga zvigadzirwa kana masevhisi, iwe unofanirwa kuziva kuti iyo proforma invoice chii, yakaita sei, painoshandiswa, chii chinoisiyanisa kubva kune invoice yakajairwa, uye zvazvinoreva nekuti ndiani anoburitsa uye ndiani anogamuchira imwe. proforma invoice.
Ichi chinyorwa chidiki chinokuudza iwe zvese zvaunoda kuti uzive nezvavo, saka, kumagumo, iwe uchazoziva zvese zvatakakuudza, uye zvimwe zvinhu zvakakosha zvakaenzana.
1 Chii chinonzi proforma invoice?
2 Chii chinonzi proforma invoice ye?
3 Chii chine invoice yeproforma ine
4 Chii chiri chokwadi cheinvoice yeproforma?
5 Ndirini paungashandisa invoice yeproforma?
6 Mimwe mienzaniso apo maInvoice eproforma achakushandira
Chii chinonzi proforma invoice?
Una Invoice yaProforma rudzi rwekunyorwa kweiyo invoice yakajairika uye yazvino, asi isina kukosha kwebhuku.
Inoshandira vimbisa kuendesa mune ramangwana kwechigadzirwa kana sevhisi kumutengi, iyo inozopihwa invoice yakajairika ine data rakaenzana uye zviyero zviri muprivho invoice.
Iko kuzvipira kubva kumutengesi kuenda kumutengi kuti achazopa chigadzirwa kana sevhisi pane mumwe mutengo.
Semuenzaniso: munhu muJarandilla de la Vera ari kutsvaga mota online, iyo SUV, semuenzaniso, iyo Nissan Juke.
Haana waanowana kuchamhembe kweCáceres, uye anowana imwe, nemutengo wakanaka, muAlcalá de Henares, muMadrid, asi haakwanise kuenda nekukasira, kana mutengesi haasati ave nemota yakagadzirira kuendesa.
Kuti ave nechokwadi chekuti mutengi achave nemota yake pamutengo waakawana, mutengesi kana mutengesi anomutumira Invoice yaProforma yekuvimbisa mutengo uye kutengesa kwemotokari.
Muchidimbu: kuzvipira kwekutengeserana.
Chii chinonzi proforma invoice ye?
Vazhinji vanowanzo kanganisa iyo proforma invoice yeinvoice, asi izvi handizvo.
Usati watsanangura zvishoma zvirinani kuti ndeyei, iwe unofanirwa kuziva izvozvo invoice yeproforma ine huchokwadi hwakaenzana hwekuverenga, semuenzaniso, mutengo, kana kupihwa kwekutengesa, ndiko kuti, hapana kukosha kwezvinangwa zve accounting, saka hapana kuburitswa kweinvoice yeproforma inofanirwa kuziviswa.
Inoshanda kupfuura chero chinhu kuitira kuti zvese zviri zviviri mutengesi semutengi anozvidzivirira kuitira kana mutengo ukachinja, kana kuvimbisa kukosha kwekutengesa, uye inoshandiswa kwete kwete mukutenga kudiki chete asiwo mukushambadzira kwepasi rose kwehuwandu hwezvigadzirwa nemari hombe, kuitira kunyora kukosha kwekutengesa, kana semamodeli ekutengesa anopiwa.
Kune mutengi inomiririra kuchengetedzeka, semuenzaniso wapfuura, kuti yake Nissan Juke ichave nemutengo wakabvumiranwa, kunyangwe kana vhiki dzapfuura, uye munguva iyoyo mutengo wakwira ... kana kudonha. Izvo icho chisingamiriri kumutengi, chivimbiso kana mota ikazobuda isina kukwana ... kune iyo invoice yakajairwa, kana chibvumirano, chashandiswa.
Iwe unofanirwa kuve wakajeka nezve mutsauko, uye kunyangwe uri mutengesi kana mutengi, usambovhiringidza zvisungo nezvose zvinorehwa neinvoice yeproforma kune izvo zvaisiri, pasina kumbozvivhiringidza neinvoice.
Chii chine invoice yeproforma ine
Chikonzero chikuru nei vanhu vanowanzo kanganisa iyo proforma invoice yeyakajairika invoice, ndeyekuti iwo ane data rakafanana.
Chaizvoizvo mutsauko ndewekuti invoice yeproforma inofanirwa kunge iine zita "PROFORMA”Mumusoro wenyaya wegwaro, uye inogona kuverengwa kana kupetwa kunge invoice.
Iyo data inofanirwa kuve neinvoice yeproforma ndeiyi inotevera:
Musoro unofanirwa kunge uine zita rekuti "proforma invoice", zvakajeka uye zvinonyanya kuoneka
Iyo nyaya zuva reiyo proforma invoice
Zita rekutengeserana kana zita rekambani
Nharaunda VAT nhamba
Izita rakazara kana zita rekambani
NIF, DNI kana NIE
Yakajeka uye yakajeka tsananguro yekutengesa kana masevhisi, kujekesa huwandu kana zvikamu zvechigadzirwa
Mutengo weyuniti, mutengo wese uye / kana mari umo kuitisa kunoitwa (rá)
Inishuwarenzi, kutakura, kuwedzera-ons, nezvimwe.
Nhamba yemapakeji, kurema kurema, mambure uye vhoriyamu
Nzira yekubhadhara uye mamiriro
Gwaro rakakodzera zuva
Zvekutengeserana kwepasi rese, ndopazvinonyanya kushandiswa
Mutero chitupa nhamba (mune zviitiko zvemunharaunda)
Uye hazvidikanwe kuti ive nesiginecha kana chitambi chekambani, kunze kwekunge mutengi akumbira iyo invoice yeku proforma kuti isimbiswe.
Chii chiri chokwadi cheinvoice yeproforma?
Pane dambudziko pamusoro pechokwadi cheinvoice yeproforma.
Kungoti nekuti kushanda kwayo, sekukuudza kwatinoita, hakupfuure pakuva ne hunhu hunodzidzisa kana sechibvumirano chekutengesa, senge mutengo wekutengesa kana kupihwa kunotumirwa mutengi kana tarisiro.
Izvo hazvishande sehumbowo hwekubhadhara, kana kukumbira chero chinhu chine chekuita neinvoice kana segwaro rekuverenga.
Chii icho ipapo? Izvo zvinoshanda chete sevimbiso yekuremekedza mutengo wezvigadzirwa kana masevhisi panguva yekutendeseka iri mune iyo proforma invoice.
Iyo haina kumwe kushanda kwechero mhando, uye inoshandiswa kakawanda mukutengeserana kwepasirese, mukati nekunze kweEuropean Union, kunyangwe zita regwaro chete richichinja.
Ndirini paungashandisa invoice yeproforma?
Kunyangwe iko kushandiswa kukuru kuri iko kweiyo vimbisa kuendesa chigadzirwa kana sevhisi, haisiriyo yega ine, mune inoshanda, isiri yemutemo magumo.
Fungidzira kuti hauna chokwadi nedata remutengi, semuenzaniso urikushaya chitupa chemunhu, uye kero yake yemari uye haugone kutaurirana nemutengi, asi unofanira kutumira mutengi gwaro, kunyangwe kana vakubvunza irisiti .
Sezvo zvainazvo, nekuda kwekuita zvinangwa, pasina huchokwadi, unogona kuishandisa seyakanyora.
Inoitumira kumutengi wako, kana iwe semutengi uigamuchire, iine 'nhema' kana semuenzaniso data, uye kana vese vakabvumirana, mutengi anotumira yavo chaiyo data, anotambira mitengo uye huwandu uye zvine chekuita nemari, saka, ikozvino, hongu, unogona kugadzira yekupedzisira invoice yekupedzisira.
Ndokunge, pamusoro pekushanda se dhirivhari yekuendesa, inyorwa kuitira kuti usazoshandisa 'invoice zvakajairika, chimwe chinhu icho, sekunyatso kuziva kwako, haugone kuburitsa zvakadaro nekuti hongu.
Kana iwe usingashandise proforma invoice, iwe unofanirwa kuvapa iko kushandisa. Kana iwe uri mutengi, unogona kukumbira imwe yekuchengetedza nguva kuitira kuti iwe ufunge zvirinani pamusoro pekutengeka kutenga kana kubvumirana kwemasevhisi kana zvigadzirwa.
Zvakare mutengesi kana kambani, inogona shandisa invoice yeproforma kuchengetedza nguva kuitira kuti ukwanise kushaya invoice dzakajairika. Iwe unogona kukutumira proforma invoice kuitira kuti mutengi ave nechivimbiso chekutumirwa kweinvoice inonongedza nekukasika paanenge aine gwaro iri, kuitira kuti kana awana zvakare, arege kukanganiswa nekukanganisika kunogona kuitika mumutengo wezvigadzirwa. kana masevhisi akatengwa.
Mimwe mienzaniso apo maInvoice eproforma achakushandira
Kunyangwe isu tangotaura nezve kumwe kushandiswa kweiyo proforma invoice, inokushandira iwe kune zvimwe zvinhu kupfuura zvaunofungidzira.
Tinokupai mimwe mienzaniso apo maInvoice eproforma achabatsira zvikuru:
Kazhinji maInvoice eproforma anoshandiswa netsika, mukati nekunze kweEuropean Union kuratidza kukosha kwechinhu chinotakurwa.
2.- Rubatsiro uye zvipo
Zvimwe zvipo, senge izvo zvinopihwa kune vatsva vanozvimiririra, zvinoda kudyara kweimwe huwandu mubhizinesi, uye iwe unogona kuendesa proforma invoice yekuzvipembedza.
3.- Mukushanda kwemari
Kana mumwe munhu achinyorera zvikwereti, ingave iri kambani kana munhu, munhu kana kambani inosungirwa kuita dzimwe mari, uye kuzvitsigira sechivimbiso kana vimbiso, inowirirana proforma invoice inoratidzwa.
4.- Sechikamu chikamu
Mamwe mabhizinesi anoshandisa gwaro iri 'kupatsanura' zvimwe zvigadzirwa. Semuenzaniso, kana mutengi asina mari inokwana kana mutengesi asina unit iripo, inogona kushanda seyakagadzika padivi system, kuitira kudzivirira kusagadzikana kwechigadzirwa.
5.- Kutengesa kupihwa
Chekupedzisira, isu tataura nezvazvo, asi kumwe kushandiswa: kutengesa kupihwa. Iwe unogona kutumira zvinopihwa zvekutengesa nenzira yeiyo proforma invoice, pamutengo wakadzikira pane zvaunopa kune vamwe vese, uye nenzira iyi, unozvimanikidza kuti uremekedze mutengo uri mukati medu izwi rakapihwa.
Invoice yeproforma ndiyo vimbiso yekuti mutengo uyu unenge uchishanda panguva yaunotaura uye usina huchokwadi hwekuverenga. kana chero chinhu, ichi chivimbiso chete, asi iwe unogona kuchishandisa sechinyorwa uye senge kumwe kushandiswa kwakawanda, kunyangwe mukutengeserana kwepasirese, kunyanya mutsika, mukati nekunze kweEuropean Union.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Negocios » makambani » Zvese zvaunoda kuti uzive nezve iyo Proforma Invoice
Sergio Lozano akadaro
Ndinokukorokotedzai nenyaya ino inonakidza. Imwe yeiyo mashoma akazara zvekuti ini ndawana pane proforma invoice. Chinhu chega ndechekuti ini ndaisakwanisa kudzivisa kuverenga kuti iwe unoisa nharaunda VAT nhamba seyakafanira ruzivo pane iyo proforma invoice, asi izvi ndezve chete kune avo vanoshanda vari pasi peiyo ROI kana Registry yeIntra-Nharaunda Vanoshanda, rejista umo ivo zvinongowanikwa chete ivo vekunze vanoshanda. Semuenzaniso, mumuenzaniso wakaratidzwa pakutanga pamusoro pemota, sezvo iri basa renyika, haidi nhamba yeVAT yenharaunda. Mune ino kesi, mumwe anofanirwa kushandisa modhi 036 uye anozviratidza mubhokisi 129.
Chekupedzisira, ini ndaida kuwedzera kuti profroma invoice inoshandiswa nevanounza kunze kukumbira rezinesi rekupinza, seuchapupu hwekuti chiitiko ichi chenyika dzese chichaitwa.
Pindura Sergio Lozano
Bvunza, iyo proforma invoice iyo mutengi anosaina, inobhadhariswa mutero wetampu here?
Madhipatimendi akabatana nemusika wemasheya, anobatsira here?
Chii chekuita nekurasikirwa pamusika wemusika?